Zonke ziyavuma ukuthi emfundweni yezingane kuyinqubo ebaluleke kakhulu evumela ukubeka imigomo yengane ezibaluleke kakhulu futhi izindinganiso zokuziphatha. On okuyakuba khona letindlela tekuphila kanye siqu izilungiselelo zabo yangaphakathi kuncike okubaluleke - umfanekiso ukuphila komuntu, izinhloso zakhe kanye nezinhloso ekuphileni. Nokho, uma ingane emkhayeni ezinhle, lapho abazali bakhe kanye nogogo nomkhulu uzokwazi ukubeka izisekelo umusa, ukwethembeka, ubuqotho, uthando futhi ukusekelana. Nokho, ngeshwa, kaningi zinto zenzeka kakhulu hhayi kwafana singathanda, ngoba ngaphezu Izingane zikhula endaweni ethile yomphakathi, esithinta kakhulu ukuziphatha kwabo, izimo zengqondo kanye nemibono. Zokuziphatha imfundo yokushisekela izwe zasenkulisa izingane anganikeza wabasiza kwetinhlavu ubunikazi entsha futhi isakhamuzi amandla akhe esikhathini esizayo.
Modern Uhlelo lwezemfundo njalo kushintshwe, okuholela ukwethulwa izifundo ezintsha, reorientation kancane kancane ezinye izifundo, ushona ekuhloleni social sciences. Nokho, naphezu izinqubo iNguquko okuyinto kwenzeke esikoleni samabanga aphansi, izinkinga eziningi eziyingozi elihlobene ne imfundo, hang osindayo Phezu kwamakhanda Othisha. Engingakusho nje ukuthi ezingeni yesiyalo unyaka nonyaka kuyehla, futhi inani lezingane abangenayo isikhathi amunca lwezifundo kuba more.
Kule ndaba, isibalo abazali eyaziyo ukubaluleka le nqubo njengoba imfundo zokuziphatha yokushisekela izwe zasenkulisa izingane, liyakhula. Ngeshwa, abantwana abancane ivame ukubhekana izici ezingezinhle impucuko yesimanje, ezifana ukukhangisa, ubudlova, unya futhi ukunqunywa ubugovu nenkohlakalo, nokunye. Zonke kwengqondo walo mntwana ekuqaleni siqonde, kodwa ke iqala ukwenqaba. Phela, zonke izingane - kungcono ucezu ubuhle saphezulu, nohlose ukuhla- Ilungile futhi emsulwa. Futhi kuphela uma umthelela lezi zici kuba namandla kakhulu futhi njalo ukuwohloka ingane kungenzeka, futhi uzolahlekelwa yangempela ekuphileni zendawo. Ngenxa yalokho, izingane iba nobudlova, waqoqa imikhuba emibi, qala iziphethe kakhulu baphakamisé ikhanda labo futhi uluhlaza.
Yingakho civil yokushisekela izwe imfundo lezingane zasenkulisa kubalulekile ukuba siqale ukuba bagome isizukulwane young namanje enkulisa. Phela, wonke umuntu akukho isiko angaphezu kuka abantu, into esekelwe ngokwekambiso, izinkolelo, imfundo ngokomoya nangokokuziphatha. Kulezo izinkulisa lapho zokuziphatha imfundo yokushisekela izwe lezingane zasenkulisa yethulwa njengoba emhlabeni esibophezelayo, izingane ayoziveza zihlakaniphile futhi abanamakhono. Ngaphezu kwalokho zibhekana imizwelo main womuntu, ezinjengothando, ubungani, ukwethembeka isifiso sokusiza ozakwabo. Ekuhloleni abantu izinkolelo, yezinganekwane, inganekwane nezingoma izingane wabeka imiqondo benzela njengohlelo lwesisekelo esiqinile se ukuphila kwabo yonke. Kubalulekile ukuqonda ukuthi uma ngendlela efanele usaqala yentuthuko umuntu omusha kuye ukubeka isisekelo esilungile, bese esikhathini esizayo abantwana abanjalo ungakhathazeki, ngoba ukufakwa zokuziphatha nezingokomoya uyoba insika esinokwethenjelwa nayo ukuphila.
Futhi kudlala indima imfundo ebalulekile kwamasiko amabili zasenkulisa izingane, ukuvumela izingane ukuba zibe bonke nokuthula nokuzwana, kungakhathaliseki ukuthi azifani kanjani ubuzwe, inkolo kanye nezinye. Ngakho, lapho ifingqa singasho ukuthi imfundo zokuziphatha futhi wokushisekela izwe lezingane zasenkulisa kuyingxenye ebalulekile isizukulwane ezisencane imfundo jikelele, okuyinto kufanele ifakwe uhlelo jikelele imfundo e izinkulisa, ngenxa yalokho, singathola izingane yokushisekela izwe abayomthanda ezweni labo futhi uvikeleke.
Imfundo izingane ucansi
Umlingisi Sergei Bezrukov: Filmography, izithombe